Iindaba -Lwela ubhubhane kunye
Ngobusuku bangaphambi komnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo, i-COVID-19 isasazeke ngogonyamelo. Esi sifo sichaphazele wonke umntu siye sabangela ingozi enkulu kwizigidi zabantu.
Ukusukela oko kuqhambuka, i-Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. ibisenza yonke imizamo yokuvelisa nokunikela iimaski, izibulala-ntsholongwane kunye nezinye izinto. I-Limeng Pharmaceutical ityale imali engaphezulu kwezigidi ezi-5 yuan ukwandisa umasifundisane wezonyango kunye noomatshini beemaski ezi-5.
Nge-25 kaFebruwari, u-Enhao Liu, umphathi we-Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. wazisa ngezixhobo zokubulala iintsholongwane kunye neemaski kumaziko asixhenxe kubandakanya neentolongo zePhondo laseShandong. Phakathi kwazo, imiphanda eyi-1 000 yezibulala-ntsholongwane ezingama-84 kunye neebhotile ezili-1 000 zezinto zokubulala iintsholongwane ezinikelwe esibhedlele ziya kuthunyelwa zisuka esibhedlele ziye eWuhan ukuthintela kunye nokulawula imeko yobhubhane eWuhan. Itotali yeebhotile ezingama-5,600 zezibulala-ntsholongwane ezingama-84 kunye nemigqomo eyi-1 200 yezibulala-ntsholongwane ezingama-84 zanikelwa ngeli xesha. Yonke into ekhathalayo ibonisa uxanduva kwezentlalo lweLimeng Pharmaceutical, kwaye ngeli xesha likhethekileyo, kuthathwa amanyathelo asebenzayo ukuxhasa ukuthintela kunye nokulawula umsebenzi wobhubhane.
Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. uye inxaxheba kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa amayeza Chinese kangangeminyaka engama-26, kwaye kukalwa njengeshishini eliphezulu-zobugcisa e Jinan, iyunithi phambili kunye negalelo ebalaseleyo kwezempilo kushishino kwiPhondo Shandong, ishishini phambili kwinqanaba likamasipala Jinan ngokulandelelana. Ngaphandle koko, uphawu lwentengiso yohlobo lweLimeng lukalwe njengegama elidumileyo eJinan. ILimon Pharmaceutical iyakuhlala ihambelana nefilosofi yeshishini "yomthengi kuqala, eqhubela phambili", ezinikele ekubeni nguvulindlela wokutya okusempilweni, kwaye enze igalelo kulwakhiwo lwe "Limon esempilweni kunye ne China esempilweni".
Ngeenzame ezimanyeneyo zokulwa lo bhubhane, sisebenza. ILimon Pharmaceutical Co, Ltd. yathatha inyathelo lokuthatha uxanduva kwezentlalo, kwaye ngokukhawuleza yathatha inxaxheba ekulweni lo bhubhane. Yadibana nabantu belizwe lonke ukoyisa ubunzima, kwaye yenza igalelo lokuphumelela idabi lokulwa ne-COVID-19.